Cele new Archives - SANTHITSA
ကိုဗစ်က သူမကို မတားဆီးနိုင်ပါဘူးလို့ မိုဒီ ရဲ့ရေခဲမုန်လေးက ပြောလိုက်ပါတယ်
ကိုဗစ်က သူမကို မတားဆီးနိုင်ပါဘူးလို့ မိုဒီ ရဲ့ရေခဲမုန်လေးက ပြောလိုက်ပါတယ် မောင်ယဿ ၂၀၁၆ ရီယိုအိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲမှာ ကြက်တောင် တစ်ဦးချင်း ငွေတံဆိပ်ရခဲ့တဲ့ ပူဆာလာဆင်ဒူ က တိုကျို အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက် စိတ်အားထက်သန် နေပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါက သူ့ရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှုတွေကို ဘယ်လို မှာ မတားနိုင်ပါဘူးလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကိုဗစ်က သူမကို ပိုကောင်းတဲ့ ကစားသမားဖြစ်အောင် ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ “ ပုံမှန်အတိုင်း ဆိုရင် တစ်နှစ်တစ်နှစ် အချိန်တွေ ကုန်မြန်လွန်းပါတယ်။ ကြက်တောင်လေ့ကျင့်မှု တွေနဲ့ လူမှုရေးကိစ္စ တွေကြား မှာ အနားမရအောင်အမြဲလို ဖြစ်နေပါတယ်” “အခုကိုဗစ်ဖြစ်တော့ ကျမမှာ သွားစရာတွေ …
ပွဲစီစဉ်တဲ့သူတွေက မော်နီတာတွေ ပရိုဂျက်တာတွေနဲ့ အွန်လိုင်း ပရိသတ်ကို ပြတော့မှာပဲ စိတ်ထဲမှာ ဖီးလ်တက်လာပါတယ်လို့ ဆိုတဲ့ ဒီဂျေ ဆိုဒါ
ပွဲစီစဉ်တဲ့သူတွေက မော်နီတာတွေ ပရိုဂျက်တာတွေနဲ့ အွန်လိုင်း ပရိသတ်ကို ပြတော့မှာပဲ စိတ်ထဲမှာ ဖီးလ်တက်လာပါတယ်လို့ ဆိုတဲ့ ဒီဂျေ ဆိုဒါ မောင်ယဿ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ကိုရီးယား မြူဇစ်လုပ်ငန်းကနေ အွန်လိုင်းဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “ Joy Ruckus Club’s K-Pop Superfest” ဆိုတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒိပွဲမှာ ကေပေါ့က နာမည်ကြီးတွေ သီဆို ဖျော်ဖြေသွားပါတယ်။ ဒီဂျေ ဆိုဒါကိုလည်း ဖိတ်တဲ့အတွက် သူမကလည်း သူမရဲ့ အီလက်ထရောနစ် မြူးဇစ်တွေကို လုပ်ပြသွားပါတယ်။ ရွှေရောင်ဆံပင်ဂုတ်ဝဲနဲ့ ဒီဂျေဆိုဒါက နိုင်ငံတကာ ပရိသတ်တွေကို အဲ့ဒိနေ့က ကောင်းကောင်း ဆွဲဆောင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမက …
အသက်ငယ်ငယ်လေးမှာပဲ သာသနာ့ဘောင်ကို ရာသက်ပန်ဝင်ရောက်သွားတဲ့ မေသက်ထားဆွေ
အသက်ငယ်ငယ်လေးမှာပဲ သာသနာ့ဘောင်ကို ရာသက်ပန်ဝင်ရောက်သွားတဲ့ မေသက်ထားဆွေ တရားရှာ ကိုယ်မှာတွေ့ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပဲ တရားဓမ္မနဲ့ ရင်းနှီးပြီး အေးချမ်းမှုအစစ်အမှန်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတဲ့ အဆိုတော်မေသက်ထားဆွေဟာ အသက်ငယ်ငယ်လေးမှာပဲ သာသနာ့ဘောင်ကို ရာသက်ပန်ဝင်ရောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အဆိုရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ရှည်လျားတဲ့ဆံနွယ်တွေဟာလည်း သူမကိုပိုပြီး ကျက်သရေရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စဉ် ကတည်းက သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး သူမတူတဲ့ အရည်အချင်းတွေကြောင့် အောင်မြင်မှု ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ က လေး လေး ဟာ တော်ရုံလူကြီးတွေတောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ အမွန်မြတ်ဆုံး လုပ်ရပ်ကို ပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်ခဲ့တာပါ။ အသက်ကလည်းငယ်သလို အောင်မြင်မှုတွေလည်း ရနေတဲ့အပြင် လှပတဲ့ရုပ်သွင်ပြင်လေး ကြောင့် သူမကိုအားပေးတဲ့ ပရိသတ် တွေလည်း အများအပြားပါပဲ။ …
MMA အားကစားသမား ဖိုးေသာ္ လက္လုပ္မိုင္း လုပ္မႈနဲ႔ စြပ္စြဲ ဖမ္းဆီးခံရ
MMA အားကစားသမား ဖိုးေသာ္ လက္လုပ္မိုင္း လုပ္မႈနဲ႔ စြပ္စြဲ ဖမ္းဆီးခံရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ သိုင္းေပါင္းစုံ MMA အားကစားသမား တေယာက္ျဖစ္သူ ဖိုးေသာ္ဟာ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားစဥ္ ေပါက္ကြဲၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့တယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီက ေျပာပါတယ္။ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဖိုးေသာ္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ ဗုံးစေတြ ထိမွန္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေမဓါဝီေဆး႐ုံမွာ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနစဥ္ ဖမ္းဆီးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဖြင့္ထားတဲ့ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေမာက္လမ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံထဲက Team PT အားကစားခန္းမွာ လက္လုပ္မိုင္း လုပ္ရင္း ေပါက္ကြဲခဲ့တယ္လို႔ ျမဝတီ႐ုပ္သံမွာ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေပါက္ကြဲမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ လူငယ္ ၃ …
သူတို့ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကို မထိခိုက်အောင် ရှေ့ဆုံးကနေ ဒိုင်းတွေနဲ့ ကာကွယ်ပေးပြီး မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ တိုင်ရွန်
သူတို့ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကို မထိခိုက်အောင် ရှေ့ဆုံးကနေ ဒိုင်းတွေနဲ့ ကာကွယ်ပေးပြီး မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ တိုင်ရွန် ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Model ၊သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောတွေ ဖြစ်တဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ တိုင်ရွန်တို့ နှစ်ယောက်ဟာ ဆိုရင် မိန်းကလေးပရိတ်သတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ် ချစ်ခင်အားပေဒမှုကို တစ်ခဲနက် ရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပိုင်တံခွန်တို့ နှစ်ယောက်ဟာ အောင်မြင်မှု ကိုယ်စီနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ အနုပညာ ညီအစ်ကိုတွေ ဖြစ်ကြသလို အရမ်းကို ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်နဲ့ တိုင်ရွန်တို့ နှစ်ယောက်ဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ရှေ့ဆုံးက ဦးဆောင်ပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ပါဝင် လှုပ်ရှားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်…။ အခုလက်တစ်လော ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ …
CDM ကို ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခွင့် မရခဲ့လို့ တတ်သိထားတဲ့ ပညာနဲ့ CDM ကို ကူညီပေးနေတဲ့ နီနီခင်ဇော် နီနီ Medical Practice မလုပ်တာ ၈နှစ် ရှိပါပြီ…. အစိုးရ ဝန်ထမ်းမဟုတ် CDM ကို ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခွင့် မရခဲ့လို့ တတ်သိထားတဲ့ ပညာနဲ့ CDM ကို ဦးဆုံး ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကျမသူငယ်ချင်း Dr.ထွန်းစ ရဲ့ CDMကြောင့် ဆေးရုံမသွားရတဲ့ လူနာတွေ အခမဲ့ ကုသ ကူညီပေးနေတဲ့ ဆေးခန်းမှာ ဒီနေ့ *ဆေးအကူ*အဖြစ်သာ ကူညီခွင့် ရခဲ့ပါတယ် **စကားကြုံတုန်း ပြောချင်တာက အနုပညာအလုပ် လုပ်လို့တဲ့ မဆီမဆိုင် တနှစ်တတန်းအောင်ပြီး ဘွဲ့ရပါလျှက် …
အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နေတဲ့ အသံဖိုင်နဲ့ ပတ် သက်ပြီးသူရဲ့လုပ်ရပ်အမှားတွေကို ဖွင့်ဟဝန်ခံလာတဲ့ ယုန်လေး
အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နေတဲ့ အသံဖိုင်နဲ့ ပတ် သက်ပြီးသူရဲ့လုပ်ရပ်အမှားတွေကို ဖွင့်ဟဝန်ခံလာတဲ့ ယုန်လေး ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်ယုန်လေးကတော့ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားအတွက် ပြန်လည်တောင်းပန်စကား ဆိုလိုက်ပြန်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူ့ရဲ့ အမှားများဟာလည်း ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ခွင့်မလွှတ်နိုင်စရာကိစ္စ ဖြစ်နေတာကြောင့် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ရှုံ့ချခြင်းတွေ ခံနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အသံဖိုင်က ကျွန်တော့် အသံပါဝန်ခံပါတယ်။ အသံဖိုင် က ကျွန်တော့် အသံပါ ဝန်ခံပါတယ် . ကျွန်တော် တောင်းပန်တယ် ဆိုတဲ့ စကားနဲ့မလုံလောက်ဘူး . ဘယ်လို စကားလုံးမျိုးမှ မရှိဘူးဆိုတာ သိပါတယ် ခင်မျာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း အရင်းတွေကြီးပဲ ရှိတဲ့ Group Chat မှာ . …
နှစ်တွေ ဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်း အနားမှာ ရှိနေပေးတဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့ အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ နက္ခတ်
နှစ်တွေ ဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်း အနားမှာ ရှိနေပေးတဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့ အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ နက္ခတ် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်ကြတဲ့ MRTV-4 မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် နက္ခတ်ကတော့ ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပါ ။ အရိပ်ဇာတ်လမ်းတွဲ ကနေစပြီး နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော် မင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် နက္ခတ်ကတော့ သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကို ပရိသတ်တွေ အားလုံးသိအောင် တရားဝင် လူသိရှင်ကြား တွဲခဲ့တာကို တော့ ပရိသတ်တွေလည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ ။ လတ်တလောမှာတော့ နက္ခတ်က သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ အရိုတလိုင်း အလှ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ချစ်သူ ကောင်မလေးကိုလည်း …